Ukufumana uMlinganiswa oKhethekileyo kwi-Excel Text String
Imisebenzi yasekhohlo ye-Excel, RIGHT, kunye ne-MID isebenza kakuhle ekukhupheni isicatshulwa, kodwa kuphela ukuba uyazi eyona ndawo kanye yabalinganiswa ojolise kubo. Wenza ntoni xa ungazi ncam ukuba uqala phi ukukhupha? Umzekelo, ukuba ubunolu luhlu lulandelayo lweekhowudi zeMveliso, ungahamba njani ngokukhupha wonke umbhalo emva kweqhagamshela?
Umsebenzi we-LEFT awunakusebenza kuba ufuna oonobumba abambalwa abalungileyo. Umsebenzi RIGHT uwedwa awuyi kusebenza kuba kuya kufuneka uxele ngokuchanekileyo ukuba bangaphi oonobumba abakhupha ekunene komtya wokubhaliweyo. Naliphi na inani olinikayo liya kutsala abalinganiswa abaninzi okanye abambalwa kwisicatshulwa.
Umsebenzi we-MID uwedwa awusebenzi kuba kuya kufuneka uchaze ngokuthe ngqo ukuba isicatshulwa uqala ukukhupha phi. Kwakhona, naliphi na inani olinikayo liya kutsala uninzi okanye abalinganiswa abambalwa kakhulu kwisicatshulwa.
Inyani yile yokuba uhlala uhlala ufuna ukufumana oonobumba abathile ukuze ufumane indawo efanelekileyo yokukhupha.
Kulapho umsebenzi we-Excel WOKUFUMANA uza khona uluncedo. Ngomsebenzi we-FIND, unokufumana inombolo yenani lomlinganiswa othile kwaye usebenzise isikhundla somlingiswa kweminye imisebenzi.
Kumzekelo obonisiweyo, usebenzisa umsebenzi we-FIND ngokudibeneyo nomsebenzi we-MID ukukhupha amanani aphakathi kuluhlu lweekhowudi zemveliso. Njengoko ubona kwifomula, ufumana isikhundla sehyphen kwaye usebenzise loo ndawo yenombolo ukondla umsebenzi we-MID.
Umsebenzi we-FIND uneengxoxo ezimbini ezifunekayo. Impikiswano yokuqala sisicatshulwa ofuna ukusifumana. Impikiswano yesibini sisicatshulwa ofuna ukusikhangela. Ngokungagqibekanga, umsebenzi we-FIND ubuyisela inamba yendawo yomlinganiswa ozama ukufumana. Ukuba isicatshulwa osikhangelayo sineempawu ezingaphezulu kwesinye zokhangelo lwakho, FIND umsebenzi ubuyisela inamba yendawo yokuhlangana kokuqala.
Umzekelo, le fomyula ilandelayo ikhangela ikhonkco kumtya wokubhaliweyo PWR-16-Encinci. Iziphumo ziya kuba linombolo 4, kuba iqhagamshela lokuqala elidibana nalo ngumlinganiswa wesine kumtya wokubhaliweyo.
Ungasebenzisa umsebenzi we-FIND njengengxabano kwi-MID function ukukhupha inani elimiselweyo labalinganiswa emva kwenombolo yesikhundla ebuyiswe ngumsebenzi we-FIND.
Ukufaka le fomyula kwiseli kuya kukunika amanani amabini emva kweqhenqa lokuqala elifunyenwe kwisicatshulwa. Qaphela i +1 kwifomula. Kuquka +1 kuqinisekisa ukuba ushukuma ngaphezulu komlinganiswa omnye ukuya kwisicatshulwa emva kweqhagamshela.
=MID('PWR-16-Small', FIND('-','PWR-16-Small')+1, 2)
ukhetho lokuzalwa ngokusisigxina
Yintoni unyango lwe-azithromycin
Ngaba idramamine ikhuselekile ekukhulelweni
ukupeyinta ifanitshala ngepeyinti yetshokhwe
Imilinganiselo ye-methocarbamol yezinja